သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): "တုံးဖလားသူကြီးမင်း အွန်လိုင်းဆုံးမစာ"
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 01:16
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆုံးမ စာလေးအတွက်
ကျေးဇူးပါ တဂျီးမင်းရေ :)
Thursday, 20 February 2014 at 01:57:00 GMT
Comment ပေးဖို့ မမေ့ရဲတော့ဘူး သူကြီး အားမရှိမှာစိုးလို့း)))
ဆိုလိုချက်လေး ကောင်းတယ်ဗျာာာ ဘကုန်းရွာက ကြည်နူးစရာပါ ။
Thursday, 20 February 2014 at 02:45:00 GMT
အဟောနဲ့အပြောလေးတွေကို စီးချက်ညီညီ ရေးပြသွား တာလေး သဘောတကျ ... :)
Thursday, 20 February 2014 at 03:33:00 GMT
စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် "ဘ" ရွာလေးကိုအလည်လာသွားပါတယ်။ Comment ပေးဖို့ မမေ့ပါဘူး တဂျီးမင်းအားရော့ပြီး ဘလော့ မရေးမှာစိုးလို့ :))) ခင်တဲ့အန်တီလေးမေခင်
Thursday, 20 February 2014 at 07:08:00 GMT
တုံးဖလားသူကြီး လူပျိုကြီးဘ၀ကကျွတ်တန်းဝင်ပါစေ :P
အတော်လေးကောင်းတဲ့ ဆုံးမစာမို့ ကူးယူသွားပြီနော် :)
Thursday, 20 February 2014 at 07:42:00 GMT
တဂျီးမင်း အမှန်တွေ ပြောပြီးဆုံးမစာရေးထားတယ်. :)
Thursday, 20 February 2014 at 08:21:00 GMT
ဟိုက်ရှားဘားစ်...ကျည်းကန်ရှင်ကြီးတောင် ထိုင်ငိုသွားလောက်တဲ့ တုံးဖလားလူပျိုကြီး ဆုံးမစာပေပဲ သူကြီးမင်းရဲ့...
ဒါမျိုးရေးဖို့ စိတ်ကူးနေခဲ့တာ ဆယ်နှစ်တောင်ပြည့်သွားပြီ နှစ်ကြောင်းကနေကို မတက်တော့လို့ ထိုင်နေရသဗျို့...သူကြီးမင်းတို့ကျတော့လည်း ကောက်ခါငင်ခါ ရေးလိုက်တာ ချောနေပါရောလား...လေးစားသဗျာ...
ဘလော့ရွာကြီး သာယာစည်ပင်ပါစေဗျား...( စည်ပင်သာယာမဟုတ်ဘူးဗျနေား)
Thursday, 20 February 2014 at 09:29:00 GMT
ဒါမှ နောင်နှစ်တရာမှာ တုံးဖလားတဂျီးမင်းမစ်တာစာတွေ ညာညားဖတ်ရမှာ... :)
Thursday, 20 February 2014 at 09:38:00 GMT
ဆုံးမစာလေးတွေ ဖတ်ပြီး အကြီးကြီးပြုံးသွားခဲ့ပါတယ် သူကြီးမင်းရေ..
ဂူမှထွက်ကာ မပျက်လာရင်း မပျင်းမရိ ကော်မန့်ပေးသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အထာပေးခံရလည်း မသွေးတတ်တဲ့လက်ဆိုပေမယ့် အတော်ဆွေးရမစိုးလို့ စာရေးဖို့တော့ လက်မနှေးဝံ့တော့ပါဘူးလို့.. :D
Thursday, 20 February 2014 at 12:39:00 GMT
Thursday, 20 February 2014 at 15:19:00 GMT
ကောင်းလိုက်တဲ့ကဗျာသာဂျီးရေ ရေးတတ်လိုက်ပုံများ လက်ဖျားခါရတယ်------အားတိုင်းရောက်ပါတယ်ရှင်--------
Thursday, 20 February 2014 at 22:07:00 GMT
want to write in Myanmar font but mostly use ipad so no chance .
i miss when our poem again and again.
Friday, 21 February 2014 at 01:35:00 GMT
ဆုံးမစာလေး ထိပါ့ သဂျီးမင်း.. :)
Friday, 21 February 2014 at 03:30:00 GMT
ဦးစွာလာချီးကျူးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ မောင်ဒွတ်တိယ။
ထမင်းဆယ်လုပ်သည် ကြက်ဥတစ်လုံး အားနဲ့ ညီမျှ၏။ ကြက်ဥဆယ်လုံးသည် မြေပဲတစ်စေ့ အားနဲ့ ညီညွတ်၏။ မြေပဲဆယ်စေ့သည် ကွန်မင့်တစ်ခု အားနဲ့ ညီမျှ၏ တဲ့။ ဗလ(အား)အလှူ လာလှူတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မောင်မျိုးရေ။
သဘောတကျရှိတယ်ဆိုရင်ဖြင့် အားတွေတက်လာပြီး ထပ်ဟောပြဖို့ ဖန်လာပြန်ပြီပေါ့။း)
တီလေးမေခင်လဲ အားဆေး လာထိုးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။ ထပ်လဲ လာဦးနော်။
တီတင့်ရေ... ရင်ထဲက နေပြီး မေတ္တာတွေ တစ်လှေကြီး ပို့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော် တီတင့်။
ကူးယူသွားပြီး တီတင့်ရဲ့ အိမ်ဦးနတ်ကို ဖတ်ပြရင်တော့ ဘယ်က ပေါကြောင်ကြောင်ကောင် ရေးထားလဲမသိဆိုပြီး ရယ်ကြဲကြဲလုပ်နေမှာ မြင်ယောင်နေမိသေးတယ်။း)
အမှန်တွေ အမှန်တွေ ဆွေလေးမွန်ရေ။ မယုံမရှိနဲ့ ငမှုံကိုယ်တွေ့။း)
ဆရာဟန်ချီးကျူးလိုက်မှ ဘယ်လို နေရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။း)
ဆရာဟန်တို့ လက်စွမ်းက ဒီထက် အဆတစ်ရာမက ထက်ပါတယ်ဗျာ။ မလုပ်ကြည့်သေးလို့သာ။ စိတ်ပါလာပြီဆိုရင် ဆရာဟန်တို့ ကဗျာ့ရေစီးက ငြိမ့်ငြောင်း သာယာပြီး တေးသီသံတွေ လှုိင်နေတာပါ။ သာယာစည်ပင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် စည်ပင်သာယာဘဲဖြစ်ဖြစ် နာမည်လေး ကောင်းပါတယ် ဆရာဟန်။း)
မိစုချစ်တို့လဲ ခုမှ ဘလော့ပေါ် ပေါက်ချလာတော့တယ်။ အပုန်းတော်တော်ကောင်း။ ကိုရေချမ်းကြီးဆီက ကုန်ကြမ်းတွေ များများ ထုတ်ပြီး ဘလော့ပေါ် မကြာမကြာလာနော်။ လိုအပ်တဲ့အနေရာမှာ ခစ် ခစ် ဆိုပြီး ထည့်ရေးတာ သဘောအရမ်းကျ။
တကယ့်ရသစာပေ ကောင်းကောင်းရေးသားနေတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက် ပေါကြောင်ကြောင် သူကြီးမင်းဆီ လာအားပေးတာ အရမ်း အားရှိသွားပြီ။ ထပ်ပေါဦးမှာ စိတ်ချ။ အဲလေ... ထပ်ရေးဦးမှာ။
နောက်တစ်ခါဆို လက်မနှေးနဲ့တော့နော် အခုလိုလေးတော့ အသံပြုထားခဲ့ဦး။ ဒါမှ သူကြီး ဆက်ကရတာ အားရှိမှာ။း)
ကြောင်စမင်းတို့လဲ ပျောက်သွားတာ အတော်လေး ကြာပါပကော။ ကဗျာမရေး စာမရေးတာ ကြာလာရင် သူကြီးမင်းကတော့ အဆင်ပြေနေကြလို့ ခံစားချက်မထွက်ပေါ် မထွက်ပေါ်တော့ ကဗျာမဖြစ် စာမဖြစ်။ အဲဒီလိုဘဲ ထင်နေကျ။
ကလေးချည်းဘဲ ကြည့်ပြီး ပီတိတွေ ဝေမနေနဲ့ဦး။ သူကြီးမင်းတို့ဆီလဲ ကလေးအိပ်နေတုန်း ၀င်ကြည့်လှည့်ဦး။း)
မအားမလပ်လာလည်တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူး အမ။
Friday, 21 February 2014 at 21:55:00 GMT
"သင့်ရဲ့စကားဟာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ အားတစ်ခုပါပဲ"ဆိုတဲ့ စာလေးကြောင့် စာရေးဖို့ အားတစ်ခုဖြစ်ပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အမြဲလိုလိုကွန်မန့်ရေးဖြစ်ပါတယ်...
Saturday, 22 February 2014 at 03:40:00 GMT
Sunday, 23 February 2014 at 18:08:00 GMT
ကဗျာဉာဏ်​ အာ​ဘော်​ က​လော်​တိုင်း ထွက်​သူကို တဖက်​လူက ပုညမျိုး စ​လေသားရယ်​လို့ထင်​လိုက်​မိခြင်း မစပ်​မိလည်​ စပ်​ပြီးသာ ပြုံးပါ​တော့ဗျာ :D
Wednesday, 26 February 2014 at 01:50:00 GMT
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဆုံးမစာလေး ဖတ်သွားပါတယ် အကိုရေ.. :)
Friday, 28 February 2014 at 03:18:00 GMT
ကဗျာအရေးအသားက သာမာန်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ထက် ပိုသွားပြီ။ ရေးတတ်လိုက်တာ။
အော် ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဒီကနေ့ကပြီး အဆော့ကို ဖြေးဖြေးချင်းလျှော့ပါဦးမယ်...
Friday, 28 February 2014 at 12:01:00 GMT
အမြဲဖတ်ဖြစ်တယ် သဂျီးမင်းရဲ့ မလွတ်တမ်းဖတ်တယ်
သလာ့မှာလဲ စာအမြဲရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပီးပါပီ။
Sunday,2March 2014 at 11:59:00 GMT
စိတ်ရောလူရော ဘကုန်းရွာကြီးကိုပြန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်ဗျား)
Wednesday,5March 2014 at 06:53:00 GMT
ဘကုန်းရွာကြီးကို ပြန်ရောက်လာပါပြီ..။ သူကြီးမင်းရဲ့ ဆုံးမစာက မှတ်သားစရာပါပဲ :))))
Friday,7March 2014 at 00:33:00 GMT